Gịnị bụ ike ma ọ bụ genital ọcha? Chọpụta ebe a | Bezzia
Susana godoy | | Mma, Mmekọahụ
Ọ bụ ezie na ọ dị ka ihe a na-echeghị n’echiche ma ọ bụ na ndị mmadụ achọghị ịma, maka ọtụtụ ụmụ nwanyị ọ nwere ike bụrụ ihe nlebara anya. Ọfụma ma ọ bụ ihe na-acha ọcha nke nwoke na nwanyị bụ ihe na-acha odo odo nke na-acha uhie uhie nke akpụkpọ ahụ n'akụkụ akụkụ ahụ na ike maka ebumnuche mara mma. Ọ dị ka ụfọdụ ndị eziokwu nke inwe akụkụ a nke ahụ nwere agba gbara ọchịchịrị adịghị atọ ụtọ ile anya n'oge mmekọrịta nwoke na nwanyị ma ọ bụ mgbe ha na-ele ibe ha anya kwa ụbọchị ma ha na-ahọrọ iji dị iche iche ụzọ ọcha ya.
A ude nwere ihe 2% hydroquinone dị ka ihe na-arụ ọrụ na-ejikarị eme ihe iji nweta mmetụta nke ike ọcha.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ihe ngwọta maka whitening nke na-akpachi anya na akụkụ-ahụ ude a
Taa, ikpu na labia majora yana mmamiri mgbidi, crotch na ọbụna ike na-akawanye njọ na afọ N'ihi afọ ime, ịhụ nsọ na afọ ntachi nwere ike ịbụ ihe kpatara ịgba ọchịchịrị nke mpaghara a. N'ihi ihe ndị a, ụfọdụ ndị na-eche na ọ dị mkpa ka ha megharịa ma mezue akụkụ ndị a siri ike nke ahụ nwanyị. Isi okwu nke usoro ịcha ọcha nwoke a bụ ime ka ikpu bụrụ ihe ntorobịa karịa ka ọ dị mma.
1 Gini mere anyi jiri nwe ochichiri di otua?
2 Ọ dị mkpa iji ịdị ọcha dị ọcha?
3 Mgbe afọ na-aga ọ ka njọ?
4 Kedu ihe ngwaahịa a nwere iji mee ka ịcha ọcha?
5 Ogologo oge ole ka ịcha ọcha na-adịgide? Ugboro ole ka ị ga-eme ya?
6 Gịnị bụ ọnụ ahịa ịcha ọcha gbasara ike?
7 Ngwaahịa ndị ọzọ iji jiri n'ụlọ
8 Otu esi zere ịgba ọchịchịrị nke mpaghara ahụ
9 Ọkpụkpụ na-acha ọcha kwesịrị ya?
Gini mere anyi jiri nwe ochichiri di otua?
Ihe na-akpata ọchịchịrị a gbara ọchịchịrị nwere ike ịbụ maka ọtụtụ ebumnuche dịka ndị ahụ a kpọtụrụ aha n’elu, mana o nwekwara ike ịbụ n’ihi ya: ọnọdụ okpomọkụ kachasị elu nke a na-ahụta mgbe niile n’ógbè a n’ihi na ọ na-ekpuchi ya oge niile, na-eyi uwe ime nke siri ike, n'ihi ọsụsọ na ọbara ọbara na-acha ọbara ọbara (nke nwere ike ime ka ọ gbaa ọchịchịrị n'ihi na o nwekwara nnukwu ibu ígwè), n'etiti ihe ndị ọzọ.
N'ihi ya, ọtụtụ ụmụ nwanyị chọrọ ịcha ọcha ahụ iji belata mmetụta ndị a.
Ọ dị mkpa iji ịdị ọcha dị ọcha?
Bụ mgbe niile dị mkpa Nwee ezigbo ịdị ọcha na gburugburu, ma ọ bụghị naanị n'ihi na agba nke akụkụ ahụ ma n'ihi na ọ dị mkpa iji zere ọrịa ma ọ bụ ahụ erughị ala ndị ọzọ. Ga-enwerịrị ezigbo nhicha protocol kemgbe the vaginal mucosa bụ oke mwute ma nwee ike ijide mgbanwe ọ bụla.
Mgbe afọ na-aga ọ ka njọ?
Ka anyị na-etolite, agba nke anụ ahụ na-agbanwe na ọ bụ ya mere ọ ga - eji malite ịba ọchịchịrị ma na ikpu ma na mpaghara ahụ. Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughi, anyị nwere ike ịnwe mkpali nke abụọ n'ihi afọ ọsịsa, afọ ntachi na ọbụnadị okpu-agha. Ahụ gbasara ike nwere ike ịza ọ oge niile, n'ihi na ọ nwere nrụgide na gluteal na perianal fringe.
Kedu ihe ngwaahịa a nwere iji mee ka ịcha ọcha?
Njikọ nke acids dịka salicylic (nke nwere oke elu na sitere na aspirin) na glycolic (nke na-abanyekwu n'ime anụ ahụ ma na-arụ ọrụ na etiti ahụ ma nwee ike ịkwalite mmepụta collagen) iji mepụta depigmentation. Anyị nwekwara ike ịchọta acid salicylic na trichloroacetic acid. Iji ngwaahịa ndị a n'ọtụtụ dị elu nwere ike gbaa akwa akpụkpọ anụ. na ụda ọchịchịrị na -apụ n'anya ka akpụkpa ahụ ga -ada ka ụbọchị na -aga. Mana ajụjụ a bụ, ọ bara uru na ihe a niile inwe mpaghara akụkụ ahụ kacha ọcha?
Ogologo oge ole ka ịcha ọcha na-adịgide? Ugboro ole ka ị ga-eme ya?
Ọfụma ma ọ bụ nnukwu ọcha ga-eme ka ụda nke mpaghara a dị mfe mana ụda ga-abụ nke onye ọrịa na-achọ. Ọ dị mkpa ịme nnọchi ọcha kwa ụbọchị iri na ise, yana ihe dị ka oge asatọ ọ ga-ezuru ya.
Site n'enyemaka nke acid glycolic nwere ike nweta ọcha zuru ezu, ma mgbe ahụ, ị ​​ga-eji exfoliator wepụ mkpụrụ ndụ nwụrụ anwụ na moisturizer iji mee ka ebe ahụ dị. A na-ahapụkarị acids ndị a n'etiti oge 15 na 20 maka oge ọ bụla ka ha wee nwee mmetụta a tụrụ anya na mpaghara ịchọrọ ịcha ọcha.
Gịnị bụ ọnụ ahịa ịcha ọcha gbasara ike?
Nke mbụ, a ghaghị ikwu na ọkachamara ga-enwerịrị nyocha mgbe niile, tupu inye ụzọ ịcha ọcha nke nwoke na nwanyị. Ebe ọ bụ na ọ dabere na obosara nke ebe a ga-emeso ya, mgbe ahụ ọ ga-abụ ego ma ọ bụ obere. Ozugbo a nyochachara ya, mgbe ahụ, a na-atụfu ego kachasị sie ike n'ọnọdụ nke ọ bụla. Mana n'agbanyeghị ihe ndị a niile, anyị ga-ekwu nke ahụ Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịma etu o siri dị, ọ ga-adị ihe dịka euro 300 na 400.
Ọrịa na-adịkarị obere ọnụ ala, mana ọ dị ntakịrị. Ọnụahịa a abanyegorịrị ọgwụgwọ yana anesthesia, nke na-abụkarị ụdị ude na alo. A na-eme ọgwụgwọ a site na laser nke dị nro na nkeji ole na ole anyị ga-apụ ma nwekwaa nkasi obi ọ bụla. N'ihi ya, ọ bụ usoro ngwa ngwa ma dịkwa irè. Cheta na mgbe ọ gasịrị, ị ga na-edebe ebe ahụ dị oke ncha na ncha na mmiri, ọ ga-ezuru oke. Agbanyeghị na ọ bụ ọgwụgwọ nke pere mpe, ihe ọzọ a na-atụkarị aro bụ na ebe a na-emeso ya enweghị ike ikpughere anyanwụ na ị kwesịrị izere inwe mmekọahụ maka otu izu.
Ngwaahịa ndị ọzọ iji jiri n'ụlọ
Ma ọ bụrụ na ịchọghị imefu nnukwu ego na nnọkọ na ebe ndị mara mma, ị nwere ike ịhọrọ ngwaahịa ndị dị iji nyere aka mee ka ikpu nwee ọcha na ị nwere ike iji na nzuzo nke ụlọ gị.
Ngwaahịa ị nwere ike ịchọta n'ahịa dị ka Ude mmịcha ọcha na-acha ọcha nwere ike ịnwe ihe egwu metụtara iji ha. Ngwaahịa ịcha ọcha nwere ike ịnwe ihe ndị na-emerụ ahụ dị ka hydroquinone. Hydrokinin bụ mmiri ọgwụ nke ejikọtara na ụfọdụ mmetụta ndị ọzọ.
Ọ dị mkpa ka ị ghara ịzụta ịcha ọcha mmamiri n'onwe gị n'amaghị ihe ọ bụla gbasara ya, nke kachasị mma bụ na ị ga-ebu ụzọ gakwuru dọkịta gị ma ọ bụ ọkachamara n'ọgwụ maka ndụmọdụ. Ọbụna ma ọ bụrụ na ihere na-eme gị ịgwa onye ọzọ banyere nke a, ọ ka mma ka ị mee ya iji zere ihe ịtụnanya ma ọ bụ mmeghachi omume na akpụkpọ gị.
Ngwaahịa ndị na-eme ka akụkụ ụmụ nwanyị na-acha ọcha nwee ike inyere gị aka ime ka ụda akpụkpọ gị dị nro ka ọ wee pụta ìhè ma dịrị n'otu ya na akpụkpọ anụ ahụ gị fọdụrụnụ. Ihe dị mma banyere ụdị ngwaahịa a bụ na ị nwere ike iji ya n'ụlọ gị, nke ahụ bụ na enwere ụmụ nwanyị (ndị na-adịkarịghị) anaghị enwe ahụ iru ala mgbe ndị ọzọ metụrụ ikpu ha aka maka ebumnuche ịchọ mma. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere isiokwu a, ebe a anyị nwere ụfọdụ ọgwụgwọ ụlọ maka amụ nwa nwoke.
Otu esi zere ịgba ọchịchịrị nke mpaghara ahụ
Ọ bụ eziokwu na mgbe ụfọdụ izere ime ka ọchịchịrị gbaa gburugburu abụghị obere ọrụ. Dịka anyị kwuburu, ihe kpatara ya nwere ike ịdị iche iche na ọ bụghị ha niile ka anyị na-achịkwa. N'ihi ya, ka afọ na-aga, anyị nwere ike ịga n'ihu na-ahụ, ma ọ bụ ikekwe ọbụlagodi na obere ike, kwuru ọchịchịrị. Kedu ihe dị anyị n'aka iji nwee ike imezi ọnọdụ a?
Na ịdị ọcha chiri anya anyị ga-ezere ụdị ngwaahịa niile nwere ezigbo ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ. Ihe kachasị mma bụ iji ncha ma ọ bụ gels dị nro akọwapụtara maka nlekọta chiri anya mgbe niile. Anyị ga-ezerekwa talcum ntụ ntụ. Ọ kachasị mma ịsa nke ọma na ncha na-anọpụ iche na mmiri., iji mee ka akwa nhicha ahụ dị ọcha.
Dị ka o kwere mee, ị kwesịrị izere uwe siri ike. N'ihi na nke a ga - egbochi ọbara ịgbagharị n'ụzọ ziri ezi. Ọ bụ eziokwu na ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka uwe dị nro na nke na-agbanwe nke ukwuu, anyị agaghị enwe nnukwu nsogbu dị ka a ga - asị na ọ bụ akwa nwere akwa dịka denim. N'agbanyeghị nke ahụ, eyikwaghị ha mgbe niile.
Uwe ime ime, mee ya owu. Ihe dị mkpa anyị niile maara, mana na anyị nwere ike ichefu oge ụfọdụ. Gini mere eji akwado owu? Ọ dị mma, maka na ọ bụ akwa a na-eku ume na nke a ga - enyere anyị aka igbochi ebe ahụ ịgba ọchịchịrị, ka oke ọsụsọ ma ọ bụ iru mmiri dị na mpaghara ahụ.
N'ịbụ ebe dị oke nhịahụ, ma akụkụ chiri anya na mpaghara gbara ha gburugburu, anyị ga-ezere esemokwu, dịka ọmụmaatụ mgbe anyị na-eme egwuregwu na-achọ esemokwu n'akụkụ oke ma ọ bụ gburugburu. N'ihi ya, anyị kwesịrị ịna-eyi uwe kwesịrị ekwesị mgbe niile ka ahụ́ ruo anyị ala.
Ọkpụkpụ na-acha ọcha kwesịrị ya?
Ajụjụ a bụ ihe na-atọ ụtọ ị ga-ebu n'uche n'ihi na ọ ga-adabere na ndụ gị na otu ị chọrọ iji ego gị, n'ihi na ụfọdụ ọgwụgwọ genital na-acha ọcha nwere ike bụrụ ezigbo ọnụ.
Na, kedu ihe eji eme ka ebe ọcha dị ọcha? Ọ bụ ihe dị mma naanị na ị nwere ike ịhụ onwe gị na nzuzo gị ma ọ bụ na mmekọrịta gị. O nwere ike ịbụ na ụfọdụ ndị na-eme ihe nkiri na-ekpebi ụdị ịcha ọcha ma ọ bụ ndị ọzọ ndị na-ahụ maka ihe ndị metụtara ọkachamara ga-egosiputa akụkụ ahụ ha mgbe niile maka foto ma ọ bụ ebumnuche ndị ọzọ, mana ọ bụrụ na a na-ekpuchi akụkụ ahụ gị ... ọ bara uru ido onwe gị ka ọgwụgwọ ndị a mee ịcha ọcha? Ma ọ bụghị otu ka ị mee ka ikpu gị dị ọcha dịka ọmụmaatụ ezé gị na ị na-egosi ha ụwa kwa ụbọchị ma ha ga-enye gị ọdịdị ahụike ma ọ bụ adịghị ọcha.
N'agbanyeghị nke ahụ, enwere m olileanya na ozi a niile enyerela gị aka ịmata ihe ọ bụ genital ọcha. Ugbu a gwa m, ị ga-enwe ike ị nweta ụdị ọgwụgwọ a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Mmekọahụ » Ọkpụkpụ ma ọ bụ genital ọcha
Ihe 133 kwuru, hapụ nke gị
Ndewo, enwere m crotches gbara ọchịchịrị ma eziokwu ahụ bụ, ùgwù onwe m dị oke ala, m ga-achọ ịma ma ị nwere ike ịkwado ude nke nwere ihe niile ị na-ekwu, enwere m ezigbo mmasị n'ịghachite nchekwa m, daalụ
ỌBARA, ANA M KWES THATR THAT NA YOU NA-EJI CREMOQUINONE CREAM ... Ọ B EX ỌR EX, NA MB THE WILL GA-ECHERE NA-EWERE, MA NKE A GA-EME KA YOU NA-EJI YA, ANA M EJI YA N'ALU Ọ B ANDLA M H IR HAVE NT RTA ỌZỌ ... Enwere m olile anya na ọ ga-enyere gị aka
Ana m akwado ka ị gaa ebe a pụrụ ịtụkwasị obi mara mma, ha ga-ahụ mpaghara ịchọrọ ịcha ọcha ma ha ga-akwado ọgwụgwọ na ọnụ ọgụgụ nke oge ịchọrọ iji nwetaghachi nchekwa gị. Ihe kachasị mkpa bụ na ha na-eme nyocha iji hụ ma ị nwere ụdị ihe nfụkasị ọ bụla ma ọ bụ mmeghachi omume na-adịghị mma, ebe ọ bụ na ebe ịchọrọ ime ya bụ mpaghara anụ ahụ dị nro.
Echere m na ọ baara gị uru, ma degara anyị akwụkwọ ka anyị mata etu o si gaa. Jisie!
Ndewo, ebee ka m nwere ike ịzụta acid ahụ ma m nwere ike ịme ọgwụgwọ ahụ n'onwe m?
Ọ ga-amasị m ịmata ma ị nwere ntụzịaka ọ bụla gbasara ebe a na-eme ka ihe na-eme ka nwoke nwee ọcha na ebe ị mụtara etu esi eme ya. Site ugbua na-ekele gị nke ukwuu.
Enwere m ọchịchịrị nke akụkụ ahụ m, enwere m onwe m na ihere na ihere m na-eme m na enweghị m ihe m ga-eji mee ihe mara mma, nke ọ na-atụ aro m
Zaghachi ka arelis navarro
Ndewo Virginia, ana m agwa gị na sistemụ ọcha a dị nso nso nso a. Ọgwụ erubeghị mba niile, mana adala mba, ọ bụ ihe gbasara oge. Ozugbo anyị nwere Ama., Banyere ụdị, na / ma ọ bụ ebe mara mma na-eme ya, aga m eme ka ị mara. Daalụ maka ịdegara Mujeres con Estilo akwụkwọ ma kwụsị ịkwụsị ileta anyị!
M Ga-achọ inye m ụfọdụ nnata »HOMEMADE» TO WHITEN GENITAL AREA BIKO !!! Enwere m ezigbo ọchịchịrị ndị ahụ
Zaghachi na kAREN
Ndewo Karen! Banyere ajụjụ gị, ọ dị nwute na m ga-agwa gị na enweghị m ndenye ọgwụ ọ bụla eji eme ụlọ iji mee ka akụkụ anụ ahụ dị ọcha, ana m akwado ka ị gakwuru dọkịta na-ahụ maka ọgwụ, ọ ga - enwe ike idozi nsogbu gị. K beyak bụt anam fi. N'oge a enweghị m ike inyere gị aka, mana ozugbo enwere m ozi ọhụrụ m ga-akpọtụrụ gị.
Daalụ maka ide.
Abụ m onye nwere akpụkpọ ọcha ma enwere m egbugbere ọnụ dị omimi nke m nwere ike ịme na ihe kpatara m ji nwee ha, enwere m mmasị na ya nke ukwuu, daalụ
Ndewo Bianka! Ihe m dụrụ gị ọdụ, dịka m gwaworo Karen na mbụ, na ị ga-ebu ụzọ hụ dọkịta na-ahụ maka ọgwụ, atụla ụjọ ma ọ bụ mee ihere, n'ihi na ọchịchịrị gị nwere ike ibute ọtụtụ ihe, ebe ọ bụ mpaghara anyị kpuchiri ma sie ike maka ya uwe ime, maka ọsụsọ, ụcha ma ọ bụ enweghị ya ... gaa leta dọkịta mgbe niile iji hụ gị ma mụọ ikpe gị.
Echere m na m nyeere gị aka.
Daalụ maka idegara anyị akwụkwọ.
Ọ ga-amasị m ịmara ebe a na-eme ka ọcha dị ọcha na ebe a na Guadalajara Mexico City
Zaghachi IMELDA MAYA
hello ... nke ọma ederede dị ezigbo mma ma ọ na-ejikwa zaa ajụjụ ụfọdụ, mana achọrọ m ịma ebe m ga - esi mee nke a ma ọ bụ ebe m ga - enweta ude.
Mụ agbọghọ, ọ bụrụ n’ịchọrọ ime ya, ndụmọdụ m bụ ịgakwuru dibia dibia bekee, n’okwu a ọ ga-abụ dibia bekee ọ ga - agwa gị ma akpụkpọ gị ọ dabara maka ọgwụgwọ a yana ebe ị ga - eme ya. Ebe ọ bụ na anyị na-ekwu maka ude, ọ nwere acid na ihe ndị nwere ike ịkpasu anụ ahụ iwe.
Ndewo Enwere m otu nsogbu ahụ na ọdụm na-agba ọchịchịrị na eziokwu ahụ jọrọ njọ tupu ihe ọ bụla m ga-achọ ka onye dibịa ọkachamara tụkwasịrị obi ebe a na-emezigharị ebe a n'obodo a enwere m olileanya na m nwere ike ịkele gị
Ndewo Maga: Ọ dị nwute na enweghị m ozi ahụ, ma jụọ ndị ikwu gị gbasara dibia bekee nke ama ama.
Ndewo, m ga-achọ ịma otu m ga - esi merie nwata nwoke na ihe m ga - ezigara ya ka ọ mara na m hụrụ ya n’anya.
Ndewo, eziokwu bụ na ibe gị yiri ka ọ magburu onwe ya ebe ọ bụ na ọ zara m ụfọdụ ajụjụ m na-edoghị anya banyere afọ ime
Zaghachi to marisol
Ndewo, nke mbụ, ahụrụ m ibe gị n'anya, biko ewepụla ya. M nwere ajụjụ, ETERNELLE RENUEE ude bara uru maka iwepụ akara ngosi? Echere m na ọ sitere na INOVA, enweghị m nsogbu siri ike, ọ dị ka ogologo ọsọ atọ ọ bụ iji nweta ma felata, mana m ga-achọ ịma ma ọ nwere ike ịrụ ọrụ maka m? Daalụ.
Ndewo, ibe a bụ oge mbụ m batara na ibe a, ị nwere ike inyere m aka site na ịnye m ndụmọdụ maka ịchacha oghere akpa, daalụ
Peeji a dikwa oke mma Enwere m olile anya inata azịza ya n’oge n’adighi anya, daalụ
Ndewo Ivi !!! Obi dị anyị ezigbo ụtọ na peeji a masịrị gị.
Ana m enye gị ndụmọdụ ka ị buru ụzọ gakwuru onye na-ahụ maka ọgwụ anụ ahụ ebe ọ bụ na ọ bụ ọkachamara n’ihe banyere anụ ahụ na ọ ga-agwa gị nke bụ ngwaahịa pụrụ iche kachasị mma maka ụdị akpụkpọ gị, ọ bụghị anyị niile na-aza otu ihe ahụ ebe ọ bụ na enwerekwa mmeghachi omume nfụkasị ahụ.
Ekele na ekele maka ịdegara anyị akwụkwọ
Achọrọ m ịma banyere ude ahụ n'ihi na mụ, dịka ọtụtụ ụmụ agbọghọ, nwere akụkụ gbara ọchịchịrị gbara ọchịchịrị, ọkachasị akụkụ ahụ ike, n'agbanyeghị akpụkpọ anụ ọcha ọ na-ewute m nke ukwuu, ọ na-ewetu ugwu m. aha m nke ọgwụgwọ ahụ na-enye ume ọkụ, ,, Na-ekele gị nke ukwuu.
Zaghachi na lunna
Ndewo Lunna, ọ dị nwute na enweghị m ihe ịcha ọcha iji nye gị, ọ dị ezigbo mkpa na ị ghọtara na ọgwụgwọ ọ bụla akọwapụtara maka ụdị akpụkpọ ọ bụla ma bụrụ onye dọkịta na-ahụ maka ọgwụ na-ahụ maka ya. Ọ bụ ya mere m ji akwado gị ka ị gakwuru onye ọkachamara ọkachamara na ọgwụ gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ mara mma mara mma.
Ndewo onye ọ bụla, Achọrọ m ịkekọrịta ihe na-arụ ọrụ nke ọma maka m, dịka n'ọtụtụ ọnọdụ, ebe a enwere m crotch, armpits na genital area nke ihe gbara ọchịchịrị agba ma enwere m ike ịsị na ọ nwere n'ihi na ihe doziri m ọnọdụ a bụ ude nke Nacar shei nke dị mfe ma dịkwa ọnụ ala n'ezie echere m na akara ọ bụla na-arụ ọrụ mana ọ bụrụ na ọ nwere vitamin E ka mma ugbu a, ihe aghụghọ ahụ bụ itinye obere akụkụ (nke a ga-eji karịa ma ọ bụ obere na ụbọchị 4) n'ime obere karama plastik na afanyekwa ihe ọ juiceụ juiceụ nke lemon ma kpalite ya na plastik ma ọ bụ ngaji osisi, ọ dịghị mgbe ọ bụla, ma tinye ya n'ebe ndị ahụ kwa abalị, akwadebela ihe niile dị n'ime ite ahụ ka ihe ọ juiceụ juiceụ ahụ na-ekpo ọkụ, ọ dị ezigbo mkpa idobe njikere òkè na friji Ọfọn, ọ na-ewe nnukwu ndidi iji hụ nsonaazụ ya, ọ bụrụ na ị na-achọ nsonaazụ ozugbo, tụfuo ndụmọdụ a, ọ dịkarịa ala were m ọtụtụ ọnwa iji dokwuo anya ebe ndị ahụ mana ọ bara uru, akpụkpọ anụ nwere co Ọbụna lor na nke armpits ọbụna na-acha ọcha, m ikwugharị ya ọ na-ewe oge na a otutu nke ịnọgidesi ike na-ahụ na ya pụta, na-arụpụta na bụ n'ezie kwesịrị ya. ebumnuche kacha mma. Daalụ
Nnọọ.!! Biko chee na enwere m nsogbu na ọ bụ na m nwere ụkwụ m na akụkụ ahụ m yana mkpịsị ụkwụ m gbara ọchịchịrị ... Ihere na-eme m na ihe kachasị njọ bụ na enwere m akara akara ... Enweghị m ike ibu ọjọọ na anaghị m atụ egwu nwere mmekọrịta… kedu ihe m ga-eme ???
hello Enwere m uzommeputa iji mee ka akpụkpọ ahụ dị ncha. ngaji nke
Ndewonu umu nwanyi !!! Enwere otutu usoro esi eme ulo iji mee ka akpukpo ahu di ncha, ma na ebe ndi mmadu na-acho acho ha, ha bu ihe di nkpa, ya mere ihe m gwara m bu ka ị gakwuru onye na-agwọ ọrịa akpụkpọ anụ ma ha ga-ahụ na ọ ga-edozi nsogbu gị.
Hụnanya na nsutu maka mmadụ niile.
SOFIA, EZIOKWU M B VR P M TOR TO TOLỌ PAGE A, NA KWES IR I M Ga-aga ya mgbe niile. HEY Achọrọ m inye m nnata iji mezue nkwupụta okwu, eziokwu ahụ bụ ihe na-agaghị ekwe omume ịnweta ha na m na-ekpe ikpe na egwuregwu mana m anaghị ahụ nsonaazụ. DAALỤ
Ọ ga-amasị m ịmata ma cellulite, akara gbatịrị na akụkụ ojii nke akụkụ ahụ na-apụ n'anya ma ọ bụrụ na uzommeputa maka ude nke peel shei bụ
Zaghachi na sandra
Ndewo Sandra !!! Cellulite nwere ike ịpụ n'anya, mana ị ga-elekọta onwe gị nke ọma na nri gị, hydration na ị ga-arụ ọrụ ahụ oge ụfọdụ, nke a bụ ụzọ isi kpochapụ cellulite. Enwere ike ịme anụ ahụ, a na-enweta ya na nnọkọ ole na ole mana nke a bụ nwa oge, ị ga-eme ọgwụgwọ ahụ ọzọ. Gbatị akara bụ akara anụ ahụ, ị ​​nwere ike melite ndị ka na-acha uhie uhie, mana iwepụghị ha.
Ọ ga-abụ ezigbo mgbanwe
Ndewo, achọrọ m ịjụ maka akara agbatị, enyi m nwanyị anwalela ọtụtụ ihe ma ghara ibelata ya na ihe ọ bụla ma na Kama nke ahụ, ha na-etolite karịa, enwere m mmasị na ya dịka nke a mana ọ na-enwe oke nsogbu site na mgbatị A brunette na ha ka na-ahụkarị karịa ụmụ agbọghọ ndị ọzọ, ha kwuru banyere ịwa ahụ, ụdị ịwa ahụ ọ bụ, onye m nwere ike ịjụ maka ya ma ọ bụrụ na ha maara ụlọọgwụ na Puebla, Mexico ebe m nwere ike ime ya, m ga-enwe ekele maka ya nke ukwuu, ma ọ bụ ụdị ọgwụgwọ ndị ọzọ nwere ike ịkwado m
Ndewo dan! M na-agwa gị na mgbatị ahụ bụ akara si na akpụkpọ anụ. Enwere ike ịgwọ ma meziwanye akara aka ma ọ dị mwute na ewepụghị ya kpamkpam.
Ọ bụrụ na enyi gị nwanyị nwere uhie na-acha uhie uhie, oge a ka mma ha, gwa ya ka o jiri ude pụrụ iche maka akara mgbatị ma bụrụ onye na-agbanwe agbanwe Ọ bụrụ na ọ na-adịkarị ha mfe, ịnwere ike iji ude maka ụmụ nwanyị dị ime zụọ anụ ahụ, nke dị mma ma nyere aka igbochi ịgbatị ahụ.
N'ihe banyere ụcha ọcha, ọ pụtara na ha emeela agadi ma sie ike ihichapụ. Dị ka o kwesịrị, lee dọkịta na-ahụ maka akpụkpọ anụ, ha bụ ndị ọkachamara na anụ ahụ ma nye gị ude kwesịrị ekwesị iji gwọọ ha.
Kedu ụdị ọkachamara ị ga-aga iji mee nkwupụta nke akụkụ nwoke na nwanyị
Ndewo Moni, ọkachamara kachasị mma maka nke a bụ ọkachamara n'ihe banyere anụ ahụ, enwekwara ebe ndị mara mma na-eme ya.
Ọ ga-amasị m ịme ọgwụgwọ a mana na obodo m enweghị ebe a ga-eme ya, n'ọnọdụ ọ bụla m hụrụ ya n'anya n'ihi na anaghị m enwe mmasị mpaghara ahụ gbara ọchịchịrị ma ọlị, ọ na-atọ m ụtọ
Ọ B,, M KWESERRA MES TR THAT M NA-EME IHE ND WITH A NA-EME NT RKWU NT .KWU. NA-AKWKWỌ AKWMKWỌ AKW DKWỌ AKW WITHKWỌ AKW WITHKWỌ DERMARO NA Mmiri DERMAROSE. Ọ na-atụ aro ime ya ugboro abụọ kwa ụbọchị. Enwere m olile anya na ị nwere ezigbo nsonaazụ.
Ndewo, mana ị nwere ike ikwu maka ọgwụgwọ ọ bụla m zụrụ n'onwe m, jiri nlekọta ụwa dum mee ya, achọrọ m ngwa ngwa ịcha ọcha akụkụ ahụ m na akụkụ ime nke ikpu, daalụ
Ndewo, achọrọ m ka ị gwa m ụdị ude ma ọ bụ ude mmiri m nwere ike iji nwee ike ịcha ọcha akụkụ ahụ nwoke
Ndewo, m ga-achọ ịmatakwu banyere nke a, ebee ka m ga-eme ịcha ọcha ka ọ bụ ude mmiri nke m ga-azụ
Enwere m onu ​​ara gbara ọchịchịrị ma achọrọ m ịhụ ma enwerekwa ihe m ga-eme ka ha doo anya
karalina alonso dijo
Edemede gị gbasara ịcha ọcha nwoke na nwanyị dị m ezigbo mma, ebe ọ bụ na m ga-achọ ime ihe na mpaghara ahụ ... Amaghị m ma ị nwere ike ịnye m ozi ndị ọzọ ... gbasara ego ole ọgwụgwọ ahụ na-efu, ebe m nwere ike ịchọta ya ma ọ bụ onye m ga-emeso obere nsogbu ahụ ma ọ bụ ọ bụrụ na m nwere ike ime ya n'ụlọ ... biko ana m arịọ gị maka enyemaka dị ukwuu ebe ọ na-enye m obere nwute naanị na-eche na m ga-alụ di ma anaghị m chọrọ ka di m n'ọdịnihu hụ m na ụda ahụ ntakịrị ntakịrị ... biko nyere aka !!!! M AHA GI EMAIL M bu carola_jerp@hotmail.com
Zaghachi karolina alonso
Nnọọ! Achọrọ m ịma ngwaahịa m ga-azụ iji mee ọgwụgwọ a.
ekele gị nke ukwuu!
Edith Onyekwere dijo
Achọpụtara m banyere ibe gị ma achọrọ m ịma ebe m ga-enweta ude a ebe ọ bụ maka m ọ dị mkpa dị ka nwanyị, biko adala m, daalụ
Zaghachi ka edith ramirez
Ọ dị ngwa ngwa ka m mata ebe m nwere ike ịme ihe gbasara nwoke na nwanyị, na-ewepụ ya ọcha. Enyemaka!!!
Zaghachi ka ada santana
Achọrọ m ka ị gwa m ma ọ bụrụ na ịmara ebe m nwere ike ime ka ịcha ọcha nwoke na nwanyị na ịkpa ike na-arụ na obodo ma ọ bụ na Veracruz. Daalụ.
dị ezigbo mkpa, achọrọ m ịmịchaa ịcha ọcha, biko kwadoro ezigbo ebe a na Las Vegas, NV, enwere m ọnya gbara ọchịchịrị, m ga-achọ ịma ma enwere ude iji mee ka ha dị ọcha, daalụ
Achọrọ m ịma ebe m ga-ahụ ha acidic ma ọ bụrụ na a ga-etinye ha n'ụlọ ma ọ bụ na ọ dị mkpa ịga ebe ...
Ha etinyere ya na ihe0do0nes?
Abụ m nwanyị dị afọ iri anọ na asatọ, mana akụkụ ahụ m nwere agba dị oke oji, ana m echegbu onwe m maka ịhụ onwe m otu a, achọtabeghị m ihe ga-eme ka ha dị ọcha, achọrọ m ịma ihe m nwere ike ime.
Ndewo, m ga-achọ ịma ego ole ọ na-efu na ebe ọgwụgwọ a bụ ọpụrụiche, biko, ọ dị m ezigbo mkpa, ebe m ga-achọ ịme ya.
Achọrọ m ịmatakwu gbasara isiokwu gbasara ịcha ọcha nwoke na nwanyị, dị ka ụmụ agbọghọ niile derela na m nwere otu nsogbu ahụ, ọ ga - ekwe omume na pantyhose Brazil ma ọ bụ eri na - eme ka mpaghara ahụ ike ka njọ? imeela nnọọ maka itinye uche gị.
Ọ ga-amasi m ma iji pantyhose ma ọ bụ eri Brazil na-eme ka ebe gbasara ike ka njọ. daalụ maka uche gị
Achọrọ m ịma ma ọ dị ude pụrụ iche ọ bụla m ga - azụta maka ọgwụgwọ a ma ọ bụ ka m mee ya na mpaghara pụrụ iche yana ebe ndị a. Daalụ
hello M ga-achọ ịma ka m nwee ike ịnwale ngwaahịa a
Ndewo, aha ụfọdụ nke gbasara ịcha ọcha ude… ma ọ bụ ụlọ ebe a na-anọkarị ebe ha na-eme usoro a na Mexico City…. ọ na-agba m ume ntakịrị.
Daalụ na-ekele !!!
Ndewo, kedu ka ị mere? M si Mexico City ma achọrọ m ịma otu m ga - esi mee iji nweta ude a iji mee ka akụkụ ahụ m nwee ọcha ma ọ bụ na m nwere ike ịzụta ihe ndị a n'ihe anyị na - akpọ ụlọ ahịa ọgwụ na oke ụdị ihe kwesịrị ịbụ
I meela, enwere m olile anya nzaghachi ngwa ngwa
Ndewo ... Enwere m mmasị na nkọwa nke depigmentation nke akụkụ ahụ ... na m ga-achọ ịma ebe m nwere ike ịga mee ya? 'Daalụ ..
Zaghachi ka lia
Ndewo, esitere m na Venezuela, akpọtụrụ m dọkịta na-ahụ maka ọgwụ maka ude iji mee ka akwara m dị nro na akụkụ ahụ m yana ana m akwado CLARIFEL maka iji ọgwụgwọ mee ihe iji abalị 3 kwa afọ ma ruo ugbu a, ahụla m ezigbo nsonaazụ ọ kpochapụrụ m kpuchie ezu
ATLAS Oké Osimiri dijo
Ndewo Maria, gi onye ji ude ahu, kedu ka anyi ga esi nweta ya, o gha abia ulo lob iji nweta ya, enyi, oga akiri gi nyere gi aka n’ozi banyere El Salvador DENIZE
Zaghachi ATLAS MAR TIERRA
Ọ ga-amasị m ịmata otu m ga-esi nweta ude ahụ
Ndewo, banyere ọchịchịrị dị na akụkụ nwoke na nwanyị, n'ihi na enwere m otu nsogbu ahụ, mana echere m na enwere ike m ga-egweri ma merie nsogbu ahụ na enweghị ntụkwasị obi na-ewetara gị, n'ihi na eziokwu ahụ bụ ihe na-egbu mgbu nke ukwuu, mana nke ahụ dị mma. Ndị ọzọ iji meziwanye ọdịdị nke nwoke na nwanyị m ga-achọ ịma ma ọ bụrụ na ọkachamara n'ọrịa ụmụ nwanyị nwekwara ike inye aka na nsogbu a?
Nzaghachi maria banderas
Nwada bu CLARIFEL KA Obu CLASIFEL ??? : S.
OLA BRENDA unu onye nwere aha ahu nihi na unu anaghi enyere m aka inweta usoro nri agwa m, unu nwere ike iju ma o buru na ha na ebuputa ya na ebe ndi ozo dika EL SALVADOR DENIZE
nwa nwoke dijo
Ebee ka m ga-enweta ude na ụlọ ahịa ọgwụ m si Monterrey Mexico…. ọ bụ na ọgwụ
Ebee ka m nwere ike nweta ude na ụlọ ahịa ọgwụ m si Monterrey Mexico bụ na ndenye ọgwụ
Nnenna Onwuka dijo
Kedu aha ngwaahịa a na-acha ọcha, na ebee ka ị na-eme ngalaba ndị ahụ iji mee ka akụkụ ahụ ọcha
Zaghachi Melida Fernandez
Ekele m na-amasị ndụmọdụ gị mana m ga-achọ ịma ebe m ga-ahụ ebe m ga-eme ka ụkwụ m na-acha ọcha n'ihi na m bi na New York
Enwere m akụkụ dị oke mkpa na ihere na ihere m, Achọrọ m ịma ebe m nwere ike ịzụta ịcha ọcha nwoke ma ọ bụ ọ nwere aha pụrụ iche. Biko nyere m aka
dị egwu dijo
Kedụ ka m ga-esi nweta ọgwụgwọ ahụ na ebee na ego ole kwa ka ọ ga-ewe ngwa ngwa?
Zaghachi ka yaky
Ndewo, achọrọ m ịma otu esi enweta ngwaahịa yana ego ọ na-esi apụta. Daalụ nke ukwuu
Ndewo, m ga-achọ ịma ma enwere ngwaahịa iji mee ka akụkụ ahụ m na-acha ọcha na ogwe aka m, achọrọ m ya ngwa ngwa, biko nyere m aka
Ndewo, achọpụtara m na anụ ọcha a na-atọ m ụtọ, m ga-achọ ịma ebe ma ọ bụ otu esi enweta ọgwụgwọ a na ọnụ ahịa nke a, ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịduzi m na obi abụọ m ma mara otu esi enweta ya.
Ọ ga-amasị m ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịnye m ozi gbasara ọgwụgwọ m nwere mmasị na ya, m si n'obodo ahụ, amaghị m ma ọ bụrụ na ha emee ya ebe ọ bụla, biko nyere m aka, nke ahụ ga-abụ ihe magburu onwe ya nke ga-agbanwe ndụ m ọtụtụ ma n'ezie ọ ga-ewepụ nnukwu trauma.
Ndewo, esite na vzla ma m ka nwere otu nsogbu ahụ. akụkụ ahụ m nwere akụkụ gbara ọchịchịrị. Kedu ihe ị kwadoro ?? Ngwa
Ndewo, m ga-achọ ka ị gwa m ebe m ga-eme ọgwụgwọ ahụ, m na-acha ọcha ma na mpaghara nke etiti ụkwụ na mpaghara akụkụ ahụ enwere m ọchịchịrị ma anaghị m enwe mmasị na m nwere ọtụtụ ogige m chọrọ enyemaka gị m si San Martin Buenos Aires, na-ekele gị.
Daalụ. Ndewo onye ọ bụla. Abụ m onye Colombia nke dabeere na Lima Peru ma ana m agwa gị na na Spa m na-eme ọgwụgwọ ndị a na nsonaazụ dị mma, ọkachasị anyị ndị nwanyị nwere mmasị ịhụ mpaghara ahụ dị ọcha ma doo anya.
M na-akpọ ya na ahụ m mara mma Whitening dị ka iji zoo ya ntakịrị, mana n'eziokwu, m na-aga na mpaghara bikini, crotches, n'etiti oke.
M na-eji nke mbụ ozone uzu iji mepee pores ahụ, m wee tinye ude ọcha na-acha 2% hydroquinone na-ahapụ ya ka ekpughere ya ruo minit 15 ruo 20 dabere na mmeghachi omume anụ ahụ, ewepụ m wee gaa hydration na ude mmiri. ya na vitamin E.
M na-eziga ya ịkwadebe ude maka nkwado ụlọ na azụmaahịa kwubiri.
Enwere ike ịmeghachi nnọkọ ahụ n'ime ụlọ kwa ụbọchị iri na ise iji mee ka mpaghara ahụ gbakee ka ọ na-enwe mmetụta dị nro.
Banyere ude ahụ, ịnwere ike iziga ya na laabu iji kwadebe ya nke ọma.
N'ọnọdụ ọ bụla, ha kwesịrị ime obere ule iji hụ ka ha si eme, ọ bụghị mmadụ niile nwere otu uche.
Ana m atụ anya ajụjụ ọ bụla ị ga-ajụ m site na email m.
Ekele ma echekwala, ọ bụkarịkarị ị nwere ebe gbara ọchịchịrị.
Ndewo Myriam..M si Lima ma m ga-achọ ịma ebe m nwere ike ịme ụdị ọgwụgwọ a. M hapụrụ gị email m. yenny1984_20@hotmail.com Daalụ !!
nye m adreesị nke spa gị biko dcarolina_polanco@hotmail.com
Zaghachi Diana Carolina
ANY WE na-achọ ozi gị mana ị nwere ike ịgwa anyị ihe gbasara SPA biko na nsonaazụ nke ịpị
Ndewo, enwere m mmasị na ọgwụgwọ a. Would nwere ike ịhapụ m ozi nke spa gị?
Zaghachi Hanna Hernández
Ọfọn pz enwere m akụkụ dị omimi m, ọ na-ewepụkwa m oge ọ bụla ịhụ nsọ m kwụsịrị, oge ọ bụla ọ jọkarịrị njọ m na-eche. Ọ ga-amasị m ịmata ihe kachasị mma m nwere ike ime n'okwu a iji nye ya nlekọta ka mma, dị ka ịcha ọcha ya.
nnukwu mary dijo
Ndewo, abum onye Venezuela, Maracay, o ga m acho ka i gosi ebe di nso ka m gaa alo.E meela, chukwu gozie gi maka iketa oke gi. ndị dị ka gị bụ ihe ụwa chọrọ
Zaghachi mary rico
Ndewo, achọrọ m ịma ebe m ga-azụta ude ma ọ bụ ngwaahịa akọwapụtara maka ịcha ọcha na akụkụ anụ ahụ, daalụ
A chorom ima ebe ha na eme ihe gbasara nwoke na nwanyi nke na eme ka icha achorom onye bi na Buenos Aires nke di na Argentina I meela.
Ndewo! Enwere m mmasị na isiokwu a !! Biko ị nwere ike ịnye m ozi nke ebe m nwere ike ịzụta ngwaahịa a! Ebee ka m ga-aga ma ọ bụ onye m ga-akpọtụrụ, enwere m ekele maka nzaghachi ozugbo!
Ihe ndị a masịrị m nke ukwuu mana achọrọ m ịma aha ọgwụgwọ ahụ iji mee ya ebe ọ bụ na ọ dị m mkpa ebe ọ bụ na enwere m nsọpụrụ onwe m dị ala n'ihi nke a, enwere m olileanya na ha ga-enyere m aka kelee gị
Achọrọ m ozi na ebe m nwere ike ịga M bi na North Carolina, daalụ.
Ndewo, ama m na e dere akụkọ ahụ ogologo oge gara aga, mana enweghị m ike ịchọta ntụle ọzọ. Ọ ga-amasị m ịmata n'akụkụ akụkụ nke isi obodo etiti, Buenos Aires, na ha na-ebu ụdị ọcha a? ma ọ bụ ụdị ụdị ude m ga - azụta maka nke a yana kedu ka m ga - esi tinye ha?
Zaghachi ka ọ kpọọ
Esi m Mexico City. Ebee ka m nwere ike nweta ude ma ọ bụ n'ụlọ ọgwụ ole ka m ga-enweta ọgwụgwọ ahụ ...
Ma ego ole ka ngalaba nke ọ bụla na-eri na ebee ka ha dị?
Ndewo m si venezuela. Dịkwa ka ọtụtụ n'ime unu, enwere m otu nsogbu ahụ .. Mpaghara bikini ahụ gbara ọchịchịrị, ọ naghị esiri m ike ịga n'akụkụ osimiri n'ihi nke a nakwa na adị m ọcha. Enwere m mmasị na okwu myriam m ga-achọ ịma email gị biko! Ọ bụrụ na nwa agbọghọ ọ bụla si Venezuela maara ebe ha na-eme ọgwụgwọ a na ego ole ọ na-eri, biko nyere m aka. Daalụ nke ukwuu .. Nke a bụ email m: anitax_tk@hotmail.com
Ndewo, aha m bụ Rebeca na m ga-achọ ka ị kwado m ebe dị na Mexico City ebe ha na-eme usoro ọcha. Na mbu, ekele.
Ndewo, o nwere ebe a na-eme ọgwụgwọ a ???.
Zaghachi MICHELLE ESPINOZA
Ndewo, m ga-achọ ịma ebe a na-eme ọcha, na bs.as (Argentina)
adịkwa mma .. Ọ ga-amasị m ịmatakwu gbasara isiokwu 🙂
Zaghachi michel martinez
Ndewo, achọtala m ude egosiri maka ịcha ọcha nke nwoke na-enweghị hydroquinin (ebe ọ bụ na m gụrụ na akụrụngwa a bụ ọrịa kansa?) A na-akpọ ude ahụ Pink Daisy ma ọ na-efu ihe dị ka euro 45 na ụgwọ mbupu. Emere m azụmahịa ahụ site na PayPal, ebe ọ bụ na m dị jụụ. Enyewo m ya iwu taa ọ ga-ewe ihe dị ka ụbọchị 2 iji rute, ugbu a ọ ga-anwale iji nwalee ma ọ dị irè ma ọ bụ na ọ bụghị.
kedu ka imere ude mmiri ??? Achọrọ m ịzụta otu ihe ahụ
Ndewo Quetal, ama m na ibe a bụ maka ụmụ nwanyị, mana nsogbu a dịkwa na ụmụ nwoke, ọ bịara bụrụ na onye otu m gbara ọchịchịrị, agbanyeghị na abụ m onye nwere akpụkpọ anụ, amaghim ihe bụ oke, mana ọ ga-amasị m. a cream and How to treat this problem n'ihi na ọ na-emetụta m mgbe ọ na-abịa na nzuzo .. daalụ na m email bụ peru_chanka@hotmail.com Ana m ekele gị nke ukwuu… ..
ABI M SITE MONTERREY, NL MA Ebe m ga-eme omume na usoro ma obu ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla na-eme ka a kpọọ ya na ebee ka m ga-azụta ya?
EGO INWEA M NA UGO NA OWU OWU, Achọrọ m ka unu nyere m aka inweta anụ ọhịa ọcha
Zaghachi CHIN GOLITO
Enwere ebe mara mma na Caracas-Venezuela ebe m na-eme ka akụkụ ọcha m? Daalụ
Ọ ga-amasị m ịmata ihe m nwere ike iji mee ka akụkụ ahụ m na akụkụ m dị nro na ekele
Zaghachi nye mariale
Nnọọ, Ọ ga-amasị m ịma ma ude Beducen ọ na-arụ ọrụ iji wepụ ntụpọ anụ ahụ ???
Nkọwa ahụ masịrị m mana m ga-achọ ka ha gwa m ma ọ bụrụ na e nwere ude ọ bụla ma ọ bụ ude ma ọ bụ ncha ebe ọ bụ na echiche ndị ọzọ na-ahụ m adịghị ka ọ dị mma
Ndewo .. Adị m afọ iri abụọ na ise ọ bụla, m ga-achọ ịma ebe m ga-enweta ude mmiri si na United States… ma n'eziokwu, enwetabeghị m ihe ngwọta m nke quiatr ndị ahụ nwoke na nwanyị na nke gbasara ike bụ ihe ihere maka ehh mesoro ọtụtụ ihe ... email m jack.y.20@hotmail.com Eee, ha di obi oma, hapuru m njikọ, ohh, ozi ichoro, a ga m ekele gi nke ukwuu ma na Chineke ga akwu gi ugwo maka ichoro inyere ndi ozo aka ... 🙂
Banyere ego ole ka ọ na-eri iji nyefee ọgwụgwọ ndị a otu echiche biko
Ndewo m chọrọ ịma ma ọ bụrụ na BARRANQUILLA HYA ANETETTY KWESERER WH Ebe ha na-eme White MY General Arena… Daalụ…
Achọrọ m enyemaka iji wepụ ntụpọ ndị a gbochiri m ịchọ ịmalite mmekọrịta n'ihi ihere nke ebe m na-akpachi anya na-enye m, onye nwere ike inyere m aka biko hapụ email gị M ga-enwe obi ekele maka ya na obi m niile 🙁 🙁
Matakwu: Martín Carrillo Ọgwụ Aesthetic. Calle 104 # 14A-45 Office 501. Tel. 257 2443, Bogotá. Martincarrillo.co
Zaghachi na andry
Mụ agbọghọ, hydroquinone bụ carcinogenic. O gosiputara, ọbụlagodi na obodo Europe, anaghị anabata ire ude ọ bụla dabere na akụrụngwa a.
John ocha jnr dijo
Abụ m John, ana m anabata unu niile na ụwa m na ụlọ nsọ ma ọ bụ azịza nke m chọrọ ka ekwenye gị na ihe ọ bụla kpọtụrụghị gị maka m ga-eme gị n'ike nke ndị nna nna anyị. Achọrọ m ka ị mara na m nọ ebe a iji nyere gị aka na nsogbu ọ bụla ị nwere ike ihu, anọ m n'ọhịa nke inyere ndị mmadụ aka kemgbe ihe karịrị afọ 55 ugbu a, achọrọ m ime ka ị mara na enwere m ihe dịka 7000 enyere aka idozi ndị mmadụ nsogbu dị iche iche na mba dị iche iche ma ha akwụsịbeghị ịkpọ m ka m kelee m maka ezigbo ọrụ m rụụrụ ha, ezigbo ọrụ m agbasaala n’ọtụtụ mba n’ihi na ha ahụla ezigbo ọrụ m ma nyere m aka ịgbasa ya n’ụwa niile. Achọrọ m ịhapụ gị mara na oge m na-eleta naanị ịtụle nsogbu gị niile edozila n'ihi na amaara m na ozugbo ọ malitere ịrụ ọrụ na okwu ya ọ ga-ekwupụta onye ọ bụla ebe a bụ adreesị email m ọ kpọtụrụ m
(Prophetbaz@gmail.com). Na-agabiga nyocha ma ọ bụ nsogbu,
IHE I KWURU KWESIRI IZU IGBO NILE IWU
KPỌỌ NA YOU NA-ACHỌ KA LH YOURNANYA GH L OVHINYA KA LH L H LR L KA N’AKA
Na-arịa ọrịa TIME
You na-enwe nsogbu ego
Na-achọ ezigbo ọrụ
YOU chọrọ ịbụ onye nwe ụlọ
Chọrọ ka MBIR Klas
YOU chọrọ ibia na mbụ n’ule gị
YOU B A kpakpando ma chọọ ịbụ onye a ma ama na ụwa dum
YOU chọrọ ọgaranya
Youchọrọ ka azụmahịa gị gaa n'ihu na-agagharị
YOU nwere ụlọ ọrụ ụdị ọ bụla na-achọ ịgbasa
Ichoro idobe di gi ma obu nwunye gi n’uwa gi
You na - eche nsogbu IHE
YOU NA-ATA NA Ọ D HAR KA Ọ DI IME IME ime site n’aka di gị
Na-enweta AKW INKWỌ AKWORTKWỌ MGBE Ọ BYLA
Chọrọ ịlụ ọgụ na egwuregwu egwuregwu ọ bụla
You na-eche nsogbu ihu
ONYE OWO EBU EBU EBU EBERE
YOUchọrọ inweta ihe ịga nke ọma n'ihe ọ bụla ị tinyere aka gị
B SON Nwa Gị ma ọ bụ nwa gị nwanyị dọgburu BRA STRA Gely
You na-eche mmegbu amoosu ihu
YOU chọrọ ime ka obi sie ịhụnanya ike ike nwa agbọghọ ma ọ bụ enyi gị nwanyị.
Ọ B YOU Ọ BY ỌR R BEL ABB ABR AB ABBỌRN
SIKA KWESERSR WHAT IHE I KWES ANRY IHE Ọ bụla YOU CHỌRỌ
Ọ na-esiri gị ike ịhọrọ onye gị na ya ga-ebi
You chọrọ ka ndị mụrụ gị na-akpa nganga gị
AHELREL NKWU AH OFR PR
YOU na-enwe ahụmahụ ọdịda na ndakpọ olileanya n'ihe ọ bụla ị ga-eme. (ECT)
Ọ bụrụ na ị na-eche nsogbu ọ bụla ma ọ bụ edemede naanị ihe ị ga - eme bụ ịkpọtụrụ site na email (prophetbaz@gmail.com) ma ọ ga-abụ mango zuru oke yana iji okwu m na nna nna m n'akụkụ m, achọrọ m ịme ya na-agba ama otu ụzọ ndị ọzọ siri mee na enyere m aka. Ezitela ndị na-ata ahụhụ ma gbachi m nkịtị maka na m ga-eji nsogbu zuru oke dozie nsogbu gị.Enyị nabata gị n'ụlọ nsọ m. . Nke a bụ adreesị email m ((prophetbaz@gmail.com) daalụ ..
Zaghachi John White Jnr
Ndewo, enwere m mmasị ịkọwa akụkụ ahụ nwoke m, ego ole ka ọ na-eri na ebee ka ha dị?
na Mexico nke a ga-eji ngwaahịa ya mee ihe maka mkpuchi ọkụ na akụkụ ahụ maka ụmụ nwoke
ỌMA MA MA Ọ GA-AKPỌ KWES QR THEY KWES HADR HAD ADB ADR AND NA ND AND ỌZỌ NA-EGO…. : (,
Zaghachi ka yaddy
Ndewo, azụrụ m ude ebe a na Texas na a na-akpọ ya ịcha ọcha ma azụrụ m ya na ntanetị eBay ..amazon wdg ma ana m agwa gị na m na-eji ya eme ihe ruo ụbọchị iri na ise na nsonaazụ ya dị mma ma nwee olile anya na m kwuo ga ị pụọ iche, ude dị ọnụ ala 15 dlr
M na-eji pink daisy, ana m eji ya otu izu ugbu a, m na-amalite ịhụ nsonaazụ ya, azụrụ m ya na eBay
Achọrọ m ịma adreesị ebe m na-eme laser whitening na Barranquilla
Esi m na Dominican Republic. Aha m bụ aldonza na ihe m na-eme dị ezigbo mma
Ndewo!, Abụ m 13 afọ na eziokwu bụ na achọrọ m ite ite iji dokwuo m anya ọ dị m akụkụ ebe ọ bụ na abụ m nwata nwanyị nwere obere akpụkpọ mana akụkụ m niile dị omimi bụ .M wax na mgbe m waks Ọ na-akpasu m akpụkpọ arụ ọtụtụ ihe na ọ na-eme m otu a ... ọchịchịrị mana ... agbanyeghị akụkụ m ọ bụla gbara ọchịchịrị yana akụkụ azụ m na achọghị m ude ọ bụla ka akwadoro m, ihe m chọrọ bụ ihe m ga-eme na nke m nwere ike ite ya n’onwe m n’agwaghị onye ọ bụla na m na-eji ite ite eme ka akụkụ m niile dị ọcha! PLE. BIKO!… Daalụ!
Zaghachi Ruth Castillo
Need chọrọ mgbazinye ego? Ọ bụrụ otu a, kpọtụrụ anyị markfund002@live.com ya na ozi ndia.
Zaghachi Mark Williams
Ebee ka m ga-esi nweta ncha ma ọ bụ ude ndị ahụ?
Dika enwere ndi inyinya-ibu ojii, site na Chukwu! Ole kwuru! Ma ọ bụrụ na ndị ọzọ nke ahụ na-tanned ruo mgbe ha dị ezigbo oji ,? Nke ahụ bụ azịza! Ka ọ bụ na ha na-egbu egbu na ya? Enwere nhọrọ karịa ịmịpụ lemon na canal ahụ, nke nwekwara ike iweta ahụmịhe ọjọọ. Na ọkụ anya ọ na-arụ ọrụ, belụsọ na ịchọrọ ịhụ efere ahụ mgbe ị na-eri nri ma ọ bụrụ na ị maara ihe m na-ekwu. Jisie!
Naanị m zụtara ude cremoquinone. Achọrọ m ịma ka m ga-esi ete ude a. Ee, enwere m ike itinye ya n'abalị ma saa ụtụtụ. ogologo oge ole?
Maria José Roldan dijo
Ndewo Beni, nke kachasị mma bụ na ị gụrụ mpempe akwụkwọ nke ude, n'ezie ihe niile ga-ezu ezu. Daalụ.
Zaghachi Maria Jose Roldan
Ajuju m bu ma dika glycolic acid m nwere ike ichota ya na ulo ogwu ma obu na o nwere aha ozo?
Zaghachi ka fany
Ndewo, a choro m aka, gini ka m ga eme ka odim di ocha? Acha m ocha ma akuku m gbara oji.E nwerem ihe di mgbagwoju na di m. tupu
Ndewo, kedụ otú i mere? Mụ onwe m abanyekwala na peeji a na nke mbụ ya, enwere m nsogbu na m na-echegbu onwe m na anaghị m acha ọcha ma ọ bụ aja aja, achọpụtara m na akụkụ ahụ m na-acha ọcha, dị ka depigmentation, Adị m afọ 48, o doro anya na ọ dị ka agbakọtara m unyi
Zaghachi ka eliana
biko ana m echegbu onwe m
Ndewo ụmụ agbọghọ, n'ihi na m bi na Germany ma enwere m otu nsogbu… O wutere m na ọbụnadị enyi nwoke anaghị ahụ m ka m na-enwe mmekọahụ.
Adịghị m acha ọcha ma enweghị m aja aja, mana ọ bụrụ na ọdịiche dị na agba bụ nke a na-ahụ anya ... ị nwere echiche ọ bụla ụdị ude maka ebe m na-akpachi anya m nwere ike ịbịa ebe a ebe ọtụtụ chọrọ ntụziaka m ga-achọkwa nke na-arụ ọrụ n'ezie adịghị mkpa na-eri.
Ndewo m afọ 14 na ùgwù onwe m dị ala, enweghị m mmasị iyi uwe ịsa ahụ n'ihi na enwere m crotches, mpaghara nke ọchịchịrị pulbis yana mpaghara gbasara ike na amaghị m ma m ga-agwa nne kuru m gawa dibia, m nwere ike ikwu ihe? Amaghị m ihe m ga-eme
Ebee ka ọgwụgwọ ahụ dị?
Kedu ude ịcha ọcha ị na-atụ aro?
Etu ị ga-esi nwetakwuo ume
Uru ịkụ ọkpọ bara